Shirka Wadatashiga qabyo qoraalka siyaada Hirarka oo Muqdisho Ka Furmay - Horseed Media • Somali News
Shirka Wadatashiga qabyo qoraalka siyaada Hirarka oo Muqdisho Ka Furmay
Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknaloojiyadda ee Xukumadda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ka daah furtay shir wadatashi ah oo ku saabsan qabyo qoraalka Siyaasadaha Hirarka. Lambarada iyo isku xirka.
Shirkan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Boostada, isla marlaana socon doono muddo 30 cisho ah ayaa waxaa ka qeyb galay madax ka socotay Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka, Wakiilo ka socday Shirkadaha Isgaarsiinta iyo marti sharaf kale.
Kulanka ayaa inta uu socday waxaa lagu soo bandhigay muhiimadda uu shirkan u leeyahay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan shirkadaha Isgaarsiinta Dalka, isla markaana la dhiiri geliyo in la qaato ruqsadda Isgaarsiinta, si loo helo adeegyo tayaysan oo la ogyahay.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolajiyadda Mudnae Cabdicasiis Duwane Isaaq ayaa sheegay in ka qeyb galayaasha looga baahanyahay inay aragtidooda ku darsadaan shirka, isagoo xusay in wadatashigan loogu talagalay in lagu arruuriyo tallooyinka xubnaha ka qeyb galay.
Shirkan ayaa ugu dambeyn lagu wadaa in laga soo saaro Warmurtiyeed wax ku ool ah oo ku saabsan hannaanka loo wajahayo qabyo qoraalka Siyaasadaha, Hirarka, Lambarada iyo isku xira.